Maitiro ekuisa macOS Sierra 10.12 kubva pakutanga, nhanho nhanho | Ndinobva mac
Unoda here gadza Sierra kubva pakutanga? Tiri kutarisa iyo nyowani Apple inoshanda sisitimu yeMacs uye kana tangoita kuti itorewe kukomputa yedu, izvo zvatinokurudzira kuisa kubva pakutanga kubvisa chero zvadzimwa zvikumbiro, zvikanganiso kana chero chinhu chingakanganisa chiitiko neiyo nyowani vhezheni system.
Ichokwadi ndechekuti mhando iyi yezvakakosha zvinogadzirirwa inokurudzirwa kuzviita kubva pakutanga kunyangwe hachisi chinhu chakakosha, ndiko kuti, Kana iwe usiri kuda kuisa macOS Sierra kubva pakutanga, ingo kurodha pasi kubva kuMac App Chitoro uye tinya pakuisa. Pamberi, isu tinokukurudzirawo kuti uite backup kana chimwe chinhu chikatadza kufamba, asi musimboti haina chakavanzika chinopfuura icho. Zvino kana iwe uri kuverenga izvi imhaka yekuti iwe unoda kuisa macOS Sierra kubva pakutanga paMac yako, saka Ngatione nhanho dzekuzviita kubva paBootable USB.
Chekutanga pane zvese yeuchidza vese vashandisi vanoda kugadzirisa yavo Mac kubva pakutanga kuti varipo nzira dzinoverengeka dzakazara dzekuita kuiswa kwakachena asi izvo zvatinogara tichishandisa ndizvo DiskMaker chishandiso iyo inogona kutorwa pasi zvakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti uye pano tinokusiya iwe iyi link. Chaizvoizvo inzira yekugadzira USB bootable uye kukwanisa kuisa iyo nyowani yekushandisa system kubva pakutanga uye inoshanda kwazvo kwatiri saka tinogara tichidzokorora. Maitiro acho akafanana chaizvo nezviitiko zvakapfuura asi isu tichaona nhanho nhanho kuti zvese zvinyatso kujeka kubva pakutanga.
Chinhu chakakosha mune izvi kesi ndechekuti kumisikidzwa kubva pakutanga kana kunyangwe tichizo gadziridza sisitimu yakanangana nehurongwa hwazvino, kuita kuita kwese ne MacBook yakabatana neiyo router kuburikidza netambo uye panguva imwechete yakabatana kune yemagetsi network kudzivirira matambudziko anogona kuitika mukuburitsa uye mune yekuvandudza.
1 Fomati USB / SD
3 Kuisa macOS Sierra 10.12
4 Yakakosha data
Fomati USB / SD
Chinhu chekutanga uye kana isu tichida kufambisira mberi basa apo iyo nyowani macOS Sierra 10.12 ichirodha pasi pane yedu Mac, ndeyekuita fomati yeiyo USB kana SD kadhi 8GB kana kupfuura izvo zvatinoda zvekumisikidzwa kwakachena kweiyo inoshanda sisitimu saka tinoibatanidza kune USB chiteshi cheMac uye tanga. Maitiro acho ari nyore uye isu tinongofanirwa kupinda Disk zvinoshandiswa iri mu Vamwe dhairekitori mukati Launchpad. Kamwe mukati isu tinosarudza iyo USB / SD uye tinya kudzima, tinowedzera el Chimiro: Mac OS Plus (Journaled) uye isu tinoisa zita ratiri kuda kana kunanga macOS Sierra. Iyo USB kana SD kadhi rinoshandiswa pakuita izvi richadzimwa zvachose, saka chenjera iyo data yatinayo mairi usati waita maitiro.
Kana yedu USB / SD yagadzirira, DiskMaker chishandiso chagadzirira kuita bhaotable disk uye macOS Sierra kurodha paMac yedu, tinogona kutanga maitiro. Iine USB / SD yakabatana neMac tinya pane DiskMaker icon nezve sarudzo ye gadza OS X El Capitan (isu tinofungidzira kuti macOS Sierra ichaonekwa munguva pfupi) inoshanda mushe ine macOS Sierra uye tinya pane yakamboitwa kurodha pasi kweMacOS Sierra iyo ichave iri mune yekushandisa dhairekitori senzira yekumisikidza.
Iye zvino inotibvunza isu password yemutungamiri saka tinoiisa uye tinya kuenderera. Ino yave nguva yekumirira iyo yekumisikidza maitiro kupedzisa pane 8GB USB / SD kana ikatora nguva yakanyarara, zvakajairika. Hapana mamiriro atinozovhara chirongwa ichi, bvisa iyo USB / SD kubva kuMac kana kudzima komputa. Kana tapedza tinogona kutanga iyo MacOS Sierra yakachena yekumisikidza maitiro pane yedu muchina.
DiskMaker Yakagadziridzwa kutsigira macOS Sierra. Asi kana ikasashanda kwauri, kune vashandisi vakaita maitiro kubva ku tool DiskCreator. Ichi chishandiso chekupedzisira chakafanana chaizvo neDiskMaker iri kushandiswa kugadzira USB.
Maitiro acho anogona kutora nguva yakareba, saka iva nemoyo murefu nazvo. Kana kukanganisa kukaonekwa kumagumo, usazvidya moyo, imo nekuti chishandiso hachina kunyatsogadzirira macOS Sierra Icho chishandiso chave parizvino uye maitiro anoenda mushe. Kune izvi tinogona kutarisa iyo USB / SD uye kana iyo yekumisikidza ikaonekwa mukati tinodzvanya kuti tiwane ruzivo nezvayo (cmd + i) uye inofanirwa kutora 4,78 GB yenzvimbo. Kana zvirizvo, maitiro acho afamba zvakanaka.
Kuisa macOS Sierra 10.12
Kana DiskMaker ichinge yapera neUSD / SD yapera tinogona kuenderera kune zvatiri kunyatsofarira, inova kuisirwa system paMac. Kutanga maitiro acho akareruka sekudzima Mac ine USB / SD yakabatana uye panguva yekutanga tinobatisisa Alt kiyi Kuti menyu yekutanga itarike, tinosarudza memory ye USB kana kadhi re SD kwatinowana macOS Sierra installer uye ndizvozvo.
Zvino yave nguva yedu bvisa OS X El Capitan zveMac yedu uye nezvazvo Isu tinosarudza iyo Disk Utility sarudzo uye tinodzima yedu partition kubva ikozvino OS X tichiisiya nayo el Chimiro: Mac OS Plus (Journaled). Isu tinobuda muDisk Utility uye tinopfuurira nekuisirwa kweMacOS Sierra. Kana maitiro acho apera, isu tinogona ikozvino kunakidzwa neiyo nyowani vhezheni yeanoshanda system nekumisikidza kwakachena.
Tichagara tichikurudzira kuiswa kweyekuvandudza pamakomputa, angave Mac, iPhone, Apple Watch, Apple Tv, nezvimwe, uye chikonzero chikuru ndiko kuchengetedzeka kunovandudzwa kwatinoitwa pamwe nenhau.
Iko yakachena kana nyowani yekumisikidza inosungirwa? kwete hazvisi, asi pese patinosvetuka kubva kune imwe sisitimu yekushandisa kuenda kune imwe zvinonakidza kuchenesa Mac uye kune izvo, chii chiri nani pane kuisa kubva pakutanga. Kune rimwe divi, kana tikakwanisa kudzivirira kurodha backup yeMac yedu, zvirinani zvirinani, isu tatoziva kuti zvakati omei kuisa ese mapurogiramu mumwe neumwe, asi iwe unofanirwa kufunga kuti izvi zvinoitwa kamwe chete gore uye Mac yedu uye ruzivo rwevashandisi vanozozvikoshesa.
Ndakatotaura kuti kune nzira dzinoverengeka dzekuisa yakachena kuisa kana kubva pakutanga kweMacOS Sierra paMac, asi ini pachangu ndinoifarira iyi nekuda kwekuvimbika kwayo gore rimwe nerimwe uye nekuti ini ndinomisikidza gore rese kuitira kana paine chero dambudziko kana kutadza paMac. Icho hachisi chinhu chakakosha kudzorera Mac kubva pakutangaIzvo zvinoenderana nemunhu wega wega, nekudaro nekuwana iyo Mac App Store, nekudzvanya pakukanda uye nekugadzirisa, isu tichavawo neiyo nyowani yekushandisa sisitimu yakaiswa paMac yedu.
Nakidzwa neMacOS Sierra!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa Sierra kubva pakutanga
Francis Pena akadaro
Ndingaite sei kurodhaunira kubva pc
Pindura kuna Francis Peña
Ndatenda kwazvo neruzivo rwakakosha urwu, sezvo ini ndaida kugadzirisa kubva ku0.
Yasmina Macías Pérez akadaro
Ndine chidimbu (ndinofunga chinonzi saizvozvo) neWindows .. ndichiita kumisikidza sezvavanotaura kuti ndaizoirasa here?
Pindura kuna Yasmina Macías Pérez
Nieves Casas hahaha unondisora ​​!! Zvisinei, ndine chokwadi kuti kana ukatenga, ichauya uye kana isingadaro .. zvinoenderana nekwavanogona kuiisa ipapo, nekuti mukombuta yemabhanana yavakandipa kuti ndiitore kuti ndiite navo musarudzo yekupedzisira
Kana iwe ukaisa kubva pakutanga unorasikirwa nezvikamu zvakagadzirwa asi ipapo unogona kuzvidzokorora. Funga kuti kuisa kubva pakutanga kunoreva kudzima zvese zvaunazvo paMac yako (nguva dzose negadziriro yeparutivi) uye izvo zvinosanganisira zvikamu, data uye zvimwe.
enric bertomeu akadaro
Jordi ndinofunga handibvumirane newe, kana iwe ukaisa kubva pa0 iwe unoteedzera chete chikamu icho OS inoenda, chimwe chikamu chinoramba chakamira
Pindura kunatsa bertomeu
Kurudyi, iwe unogona fomati iyo macOS kupatsanura, asi zvinokwanisika kuti kana vazhinji vashandisi vachimisa diski rese, ivo matambudziko. Ehezve, izvo zvandinokurudzira kusiya chete Time Machine uye mune yakanakisa kesi kuita backup pane yekunze dhisiki kuchenesa diski uko OS inoenda uye isina kana dambudziko. Nenzira iyi diski yakanyatsomisikidzwa uye ndipo pazvinogoneka matambudziko anodzivirirwa gore rese.
Ndatenda zvikuru nemupiro wenyu Enric
Ndiregerereiwo kupinda mukutaurirana kwenyu asi imhosva kuisa macheri pamac. Maonero angu eee
Jose Fco Cast hahaha ini ndinoshandisa kaputeni mazuva ese asi nekuda kwekufunda ndaifanira kuwana hupenyu hwangu kuti ndikwanise kushandisa zvirongwa zvakafanana nekirasi uye izvo zvandaigona kungoita neWindows, uye ndinotenda Mwari Apple inopa iyo sarudzo (iine maviri anoshanda masisitimu akaiswa)
Kutenda, zvakanaka, kana ukangotanga kumisikidza kubva pakutanga, ndinobvisa sei maapplication uye data rinondinakidza kubva ku backup?
Mhoro FidelWare, kubva kuMac App Store zvinoshandiswa pamwe neTime Machine unogona kuwana iyo data yaunoda.
Dhisiki harina kugadzirwa nekuda kwekukanganisa: Kanganiso yakaitika: -10006. Tsvaga yaona kukanganisa: Haigone kuisa diski "Isa OS X El Capitan" ku "DMX_Workdisk".
Ndakaedza kaviri, pasina kubudirira.
inotsanangurwa muchinyorwa. Iko kukanganisa kwakajairika nekuti chishandiso hachina kutanga kutsigira macOS Sierra, asi chaizvo iyo inogadzira inogadzirwa.
Hugo Diaz akadaro
NaDiskMaker X, haugone, izvi zvinowoneka kumagumo -_-
Pindura Hugo Diaz
Iko kukanganisa iko kunokandwa nekuti tinozvitaurira kuti iEl Capitan uye iri chaizvo macOS Sierra asi shamwari inotakurika inoshanda zvakafanana.
ASObjC Runner.app inondibvunza
Ndakawana izvi mu diskmaker faq:
Ini ndinoramba ndichisangana neASObjC Runner kukanganisa (Kanganiso -43. Faira ASObjC Runner haina kuwanikwa)!
Iyi inonyengera. Iyo bhagiri inoitika zvisingaite neShumba DiskMaker uye haina tsananguro chaiyo, kunze kwekukanganisa kwekukodha.
Nzira chete yandakawana iyo inogona kubvisa dambudziko raizove ku:
Shandisa Chiitiko Monitor (mu / Applicationsl / Zvishandiso) kurega chero chiitiko cheASObjC Runner;
Dzorera Mac yako;
Tarisa zvekare kana ASObjC Runner ichiri kumhanya muIchiitiko Chekutarisa;
Wobva watanga Shumba DiskMaker zvakare uye edza kuvaka yako diski.
Zvakare dzimwe nguva, kushandisa rakasiyana, rakachena chikamu rinogona kubatsira.
Kana iwe uine chero nzwisiso mudambudziko iri, ndokumbira ubate neni.
Ndinovimba zvinokubatsira iwe, maererano
Ini ndinowana kukanganisa kana chapera ... haha ​​kunyepa! Chinyorwa chakanaka kwazvo! Ndatenda!
Izvo zvinoramba zvichiitika kwandiri asi ndinofunga imhaka yekuti ini ndine beta ye macOS sierra yakaiswa.
Ndatenda zvikuru nerubatsiro.
Zvinoshamisa sei ... haifanire kunge iri dambudziko kuve neiyo beta ye macOS Sierra yakaiswa,
Tiudze kana iwe ukawana mhinduro kune vamwe vaunoshanda navo.
hahaha, iwe uchave ...
nacho moreno akadaro
Kukundikana kuita installer payload siginecha cheki, chero rubatsiro ?????
Pindura kuNacho moreno
Ini ndinowana kukanganisa kumwe chete, ndakadzima uye nekuisa uye hapana chakaiswa. Ini ndinofanira kudzorera kubva kuTime Machine.
Mhoroi, iro DiskMaker chishandiso rakagadziridzwa richipa rutsigiro rweMacOS Sierra uye harifanirwe kuve dambudziko. Muchinyorwa chakatogadziriswazve.
Kwazisai uye ndinokutendai.
Cesar Augustus akadaro
Imhaka yekuti mac yako iri kunze kwekuenderana nguva uye zuva, ita zvinotevera.
1º Buda kune iyo huru yekumisikidza skrini, enda kune zvinoshandiswa, uye vhura iyo terminal.
Kana iwe uine wifi yekubatanidza batanidza,
2yy sezvo iwe uri mune network nyora mune terminal,
"Zuva" Pasina makotesheni echokwadi !.
Nguva nezuva zvichaonekwa ,,,
3 Yekuti iwe uvandudze panguva chaiyo kubva paapuro server, nyora unotevera kuraira.
ntpdate -u time.apple.com uye kurova Kudzoka.
Ndatenda CesarAugusto. mhinduro yako yanga yakakwana….
Manheru akanaka. Ini ndinodzima chete iyo Macintosh HD chikamu kana ndinogona kudzima iyo diski rese pasina matambudziko?
ipapo mushandisi wega wega anogona kuita sezvavanoda, ini ndinokurudzira yakazara diski erasure (chero bedzi uine kopi yeTime Machine yakachengetedzwa pane imwe diski) asi iwe unogona kungodzima iyo yekushandisa system chikamu uye nekuisa ipapo.
Mhoroi, ndakazviita nezvirongwa zvese uye ndatovandudza uye zvinoramba zvichikanda kukanganisa kumwe chete, nei ndichigona kuzvigadzirisa? Ini ndatova kupera simba rekudzoreredza uye ini handikwanise kuisa chero chinhu
Pindura kuti utangezve91
Juan Jose Burciaga akadaro
Ini ndaigara ndichitenda, zvisirizvo, kuti mushure mekugadzwa kwakachena ndinofanira kurodha zvese zvese nerubatsiro rweTime Machine, ikozvino ndinonzwisisa kuti hazvifanirwe kunge zvakadaro, asi kungofunga zvekuisa yangu yese mimhanzi dhisiki nediski pachena hazviite ini unoda kugadzirisa. Zvinofanira kunge zvakadaro here?
Pindura kuna juan jose burciaga
Ndakaita maitiro ekugadzira iyo pendrive neDisk Mugadziri, mushure mekuita maminetsi manomwe ndichiisa, kukanganisa kunoonekwa: installer zvakare, ini ndagadzira iyo pendrive zvakare ini ndadzosera uye inoratidzika chaizvo zvakafanana ... ndokumbirawo mubatsire.
Mhoroi Jordi, ini ndinoita maitiro ese awakambotaura uye sekutaura kwawakaita ini ndinowana kukanganisa. Kana ini ndawana ruzivo nezvazvo (cmd + i), inondibata 4,6 Gb uye kwete iyo 4,78 GB yaunoratidza.
Ini ndinofanira kufunga kuti iyo yekumisikidza haina kuteedzerwa nemazvo kwete
Ini ndakariita pane rakaomarara dhisiki rine matatu mativi, ayo aive: DMG MAPurogiramu, NGUVA MACHINI uye OSX INSTALLER. Ini ndashandisa chirongwa kuisa macOS muchikamu chekuisa che diski rinobviswa uye chii chandishamisa… Chirongwa chadzima dhiyo rose uye chanongedzera chipaturudzo… Ndinofara kuti ndakaita kopi yemapurogiramu kare ...
Pindura kuna David G.
Mhoroi, ndinozviita neshanduro nyowani yeDiskmaker X 6 iyo yatove inotsigira macOS Sierra uye inondipa zvikanganiso. Imwe yacho ndeiyi:
Kanganiso yakaitika: -10006. Tsvaga yaona kukanganisa: Disk "Isa macOS Sierra" haigone kuiswa ku "DMX_Workdisk"
Kune vese avo vanokupa iko kukanganisa, edza kupinda Diskmaker zvakare uye gadzira iyo yekumisikidza ine itsva vhezheni
http://diskmakerx.com Isu tinogadziridza chinyorwa. Ini pachangu ndakariisa nezuro husiku uye pasina matambudziko asi neyakavandudzwa diskmaker.
Iko pamwe neshanduro nyowani yandinowana zvikanganiso.
Victor morales akadaro
Mhoroi vanhu vese. Ini ndichangobva kurodha pasi yazvino vhezheni ye diskmaker 1 awa rapfuura uye inoramba ichinditumira iko kukanganisa kwakafanana kwavanotaura "DMX_Workdisk". Ndakatarisa mukati / maVhoriyamu uye hapana cheimwe shanduro, kune chete Mac OS sierra. Wakatogadzira iyo usb zvakare, uye tangazve uye hapana. Chero chinhu chakashanda iwe?
Pindura kuna Victor Morales
Izvo zvinoramba zvichipa iko kukanganisa -10006 zvirinani kwandiri.
Pindura kune kevy
Mangwanani, ndoziva sei nezve maitiro ekuteedzera macOS Sierra mundangariro?
Mangwanani akanaka, zvinotora nguva yakareba sei kuti macOS Sierra iiswe mundangariro?
Helena Lopez akadaro
Zvinondipa iko kukanganisa kwe: "Haugone kutarisa siginecha yeiyo yekuisa pay pay"
Ini ndaita zvese neDiskMaker nyowani asi zvinondipa iyo yakafanana kukanganisa nguva dzese: S
Ndipe mhinduro ndapota !!!
Ndatenda pamberi Jordi
Pindura kuna Helena Lopez
Ndine mubvunzo ne macOSSierra, inobvumidza kuisa kunyorera kunze kweApp Store? Ini zvakare ndine pendrive inoratidzika sedhaidhi yekuparadzanisa tafura uye ini handigone kuidzima. Izvo hazvindipe ini sarudzo yekugadzira chikamu uye gwara. Zvinoitika chete kwandiri pane iyo pendrive. Ndingaisiya sei sefekitori?
Ini ndakaisa diskmaker nyowani uye yakandipa kukanganisa, ndakaedza kudzorera neTime Machine uye yakandipa kukanganisa. Iye zvino ndiri kuyedza kudzokera kufekitori modhi (cmd + R). Tichaona zvigadzirwa …… painobuda.
DiskMaker haina kushanda, ini ndaishandisa iyo Isa Disk Musiki uye yaishanda 100%.
Ndatenda zvikuru nemutungamiri.
Kutenda nemupiro Ricardo isu tichafunga nezvayo mune ramangwana dzidziso! Zvisinei hazvo DiskMaker rangu rakandishandira zvakanaka.
Ndatenda Richard! Ini ndanga ndisingazvizive uye neizvi hapana dambudziko uye ndakagadzirira kuisa kubva ku0.
zvakanaka, ndakaedza kuiisa kubva kumac uye ini ndinowana iko kukanganisa kumwe chete "haina kukwanisa kutarisa siginecha yemubhadhari wekuisa", uye hapana kana chinhu.
mumwe munhu atova nemhinduro
pane nzira yekuiisa pane kunonoka 2008 mac?
Ive nekuchenjerera neiyo "DiskMaker" chirongwa hachishande neOS Sierra. Kunyangwe ichifungidzirwa kuti ichienderana, hazvienderere mberi kuchengetedza iyo ruzivo, inoisiya iyo hafu (izvo zvakaitika kwandiri). Ndakatambura, kudzamara ndawana chimwe chirongwa chakaratidzirwa muchinyorwa chino «DiskCreator» uye zvino ndafara .. haha ​​😀
Manheru akanaka, ndanga ndichida kurodha pasi kubva kuchitoro cheapp, kuti igadzirise otomatiki, asi ini ndinowana kukanganisa kunoti "dhisiki iri harishandise chirongwa cheGIDID chetafura, uye handizive zvekuita. Ndinewe x kaputeni uye zvinondishandira, ndinofanira kuitei? ndatenda.
Ndakaigadzira neDiskCreator ini ndakawana iwo meseji: «Iyo yekumisikidza payload siginecha cheki haina kukwanisa kuitwa».
Ini ndato bvisa chikamu changu chekudzoreredza uye izvozvi handigone kumisazve chero chinhu, ini ndinongowana iyo yekudzosera sarudzo online asi hazvishande kwandiri, handizive zvekuita zvekare, ndinongofanira kuitora kune rutsigiro. chitoro! 🙁
Kutendeseka, ini handioni chero bhenefiti nekuiisa kubva pakutanga. Kunyangwe iyo yakagadzirwa peji ino inoti "... pese patinosvetuka kubva kune imwe inoshanda system kuenda kune imwe zvinonakidza kuchenesa Mac", saka hapana chikonzero chekupinda mumatambudziko. Ndakaedza kuvhura imwe uye imwe app uye zvese zvinoshanda zvakakwana. Kunyangwe iwe "watengwa" muApp Store, iyo Sierra haioneke kunyangwe iwe watove nayo yakadzingwa.
Nei uchiomesa hupenyu?
Ngatione kana paine munhu anogona kundibatsira nekuti ini handizive zvaari kuita futi ...
Ndine macbook pro 13 retina kubva muna 2013, iyo inowirirana iri 100% inoenderana. Chokwadi backup neakadaro ...
Ndine zvigadzikiso zviviri (zvinyorwa) zveSierra uye mune zvese zviri zviviri, kana yaiswa, yakaomeswa mubara rekutakudza pakutanga. Izvozvi ndiri kuita yechipiri backup kupora. Asi ini handishingi kuita yechitatu kumisikidza nekuti ndinotya kuti hapana chinozochinja.
Ini ndapfuudza iyo Yakachena My Mac, iyo Onyx, akati wandei antivirus, muchimiro zvese zvakachena. 100gb hard disk ...
Ini handizive kana ini ndikashinga kuisa kubva pakutanga nekuti ndine chokwadi chekurasa chirongwa ...
Zvakaitika kune mumwe munhu here? Pane mumwe munhu angandibatsira here?
Bruno pasetti akadaro
Kana ndadzima macbook uye ratanga ndinodzvanya Alt.Boot disk rinobuda asi usb ine sierra haioneke. Ini handizive maitiro ekuti iite kuti ioneke. Chii chandiri kutadza?
Pindura Bruno Pasetti
Luis G akadaro
Ndichine dambudziko rakafanana, ini ndatoedza maturusi ese ataurwa pamusoro kuti aite MacOS sierra bootable, inokanda iko kukanganisa "kusimbiswa kwesainzi payload siginecha hakugone kuitwa" Pane chero munhu akawana mhinduro yeizvi?
Pindura kuna Luis G
Mhoroi, ndine dambudziko rakafanana. Kana ichinge yapedza kuisa MacOs Sierra kubva kubhootable usb, ini ndinowana iko kukanganisa "kutadza kuita siginecha cheki yeiyo yekuisa payload" uye zvinondiburitsa kunze kwekumisikidza. Pane chero munhu anoziva kuzvigadzirisa?
Isu tinosiya mhinduro kuchinetso "nechisayina chemubhadharo ..." https://www.soydemac.com/solucion-la-problema-la-instalacion-macos-sierra-no-se-ha-podido-realizar-la-comprobacion-firma-la-carga-util-del-instalador/
kwaziso uye utiudze
Ed rdz akadaro
Jordi Ndinokutendai nerubatsiro rwenyu rwemutsa. Ini ndinokuudza kuti ndine dambudziko "nechisigineti chemubhadharo" zvakadaro mhinduro yakapihwa pano haisi yangu, nekuti zuva uye ikozvino data nderechokwadi. Chero zano?
Pindura Ed Rdz
Mhoro Ed Rdz, kunyangwe nguva yacho yakanaka, chinja nemawoko. Izvi zvinogona kugadzirisa dambudziko, kungotarisa kuti uve nechokwadi chekuti hazvina kukwana. Ita bhuku iri muTerminal.
Kune rimwe divi, kana ikakutaurira izvo, edza kugadzirisa zvakananga pasina backup kana kubva pakutanga kuburikidza neinternet. Wakachinja iyo Mac disk? Une Mac ipi?
Manheru akanaka, pandinoyedza kuiisa, ndinowana mhosho ndichiti ndatove ne10.2 yakaiswa, asi ini ndine kaputeni akaisirwa Chero mhinduro?
wanga uine beta vhezheni yakaiswa pane yako Mac? Izvi zvinoshamisa kuti iwe unotaura nekuti iyo Sierra vhezheni iri 10.12
ivan flores akadaro
Mhoro, zuva rakanaka, ndakaita maitiro asi kana iwe uchiisa uye yekufambira mberi bhaa inoti "0 masekonzi asara" inogara imomo, uye haina kufambira mberi kana kuita chero chinhu, ndakazviita kamwechete uye ini ndaimirira kwemaawa masere, ipapo ndakazviita zvakare maitiro uye zvinotora maawa matatu kubva zvaonekwa uye hapana. Zvandinogona kuita? Ndine macbookpro 8
Pindura kuna ivan Flores
Paunenge uchiedza kugadzira usb bootable iyo DiskMaker inokanda ini inotevera meseji: «Erasing drive '/ Volumes / USB' ..» hainzwisise meseji <>
Izvo zvakafanana zvinoitika kune mumwe munhu here? Chero mhinduro?
Mhoroi, wawana mhinduro here? Izvo zvakafanana zvinoitika kwatiri !!!
Mhoro Carla, hongu, mushure mekuuya kwakawanda nekuenda ndakakwanisa kuzvigadzirisa. Ndakaedza chiuru nguva pamwe DiskMaker X uye yaigara akandikanda kukanganisa .. Solution: DiskCreator !! 🙂 Ndichakupa iyo download link uye wozondiudza kuti zvakafamba sei. https://macdaddy.io/install-disk-creator/
inogara mune isina logo logo uye haina kana chimwe chainoita, ipapo panguva imwechete inodzima zvichingodaro zvakare uye zvakare. Chii hgfo?
Ndine dambudziko rakafanana, pandinozvitarisa kusvika ku4.2 gb uye hazvioneke pamabhuti angu ebhutsu pandinoyedza kutangazve muchina ... ini ndinongowana MAcintoch uye Kudzoreredza ..
Ndine maImacs maviri, mumwe kubva muna 2009 uye mumwe kubva muna 2011, ndinogona here kushandisa iyo usb imwechete mukumisikidza neSierra, yekumisikidza yakachena muImac yega yega?
Mhoroi, ndine 2013 MAC yanga iine vhezheni yakaiswa uye pandakagadziridza kuSierra vhezheni, haina kukwanisa kupinda muhurongwa hwekushandisa uye yakagadzira iyi meseji "vhoriyamu ine mac os kana os x kuisirwa iyo inogona kukuvara".
Izvo zvinondinetsa, ndinoziva kuti nekukanganisa uye kuzvivimba zvakanyanya muMAC, handina kumboita backup.
Ini handizive kana iyo IOS Sierra inogona kutorwa kune USB (pane imwe komputa) uye kumisikidza kubva ipapo, pasina kurasikirwa iyo data.
Pindura kuna annabelleguittard
Mhoroi ini ndoda kuchinja kune sierra asi ini ndine Leopard uye komputa yangu iri kubva 2010.
Ndichakwanisa kuisimudza yakananga kubva kuAppel chitoro here kana kuti ndinofanira kuisa chirongwa chaunotaura pakutanga kuitira kuti ndikwanise kucheka saga?
Ndanga ndichiedza kuisa mufananidzo muhombe paLeopard kwemazuva maviri uye hazvindibvumidze kuti ndiiise padhisiki repanyama randinaro mukati meMac yangu.
Ndakaverenga muforamu yandinotadza kuisa iyo sierra kana ndakamboisa Leopard. Ichokwadi here?
Mhosva yekuti ini ndakabatirira uye ndavhiringidzika kubva pakuyedzwa.
Unondipa zano rei?
Ini handinzwisise zvaunoreva kune chikamu umo usb yakarongedzwa, ndinofanira kubatanidza chero usb kune mac?.
Ndinokutendai pamberi; Kwaziso.
Mhoroi, ini ndakatanga ndaisa kaputeni ndikazopasa mac os sierra uye handina kuzviita kubva pakutanga uye maac yangu ari kubva kumagumo a2009.
MacOS Sierra yakaiswa muchikamu chipi "kare", izvo zvinofungidzirwa mumashandisirwo ????
Mhoroi, ini ndangokwidziridzwa kuita mac os sierra, uye pandinobatidza mac yangu mufananidzo weiyo login screen hauna chinhu uye hapana mumwe mufananidzo, ndoita sei?
Andres Mendoza akadaro
Mhoroi munhu wese, mushure mekuita zvese MacBookPro yangu kubva 2011 haacherechedze chero SD makadhi kana PENDRIVE mushure mekuita zvakanyanya neDiskmaker x 7 kana kunyange Diskcreator. Asi ini ndiri kuyedza kuita yakachena kuisa mushure mekuisa Sierra.
Ini handizive kana ndicho chikonzero chekuti pandinoedza kusarudza madhiraivha ebhutsu, kana SD kadhi kana Pendrive zvioneke, chete Hard Drive yakaiswa nelaptop yangu.
Pane mumwe munhu angandipa mhinduro kuti ndione kana ndichigona kamwechete uye zvachose kuita yakachena kuisa?
Ini ndoda kuita iyo yakachena yekumisikidza nekuti ndiri kunetsekana neMail uye nevamwe tsamba vatengi. Mushure menguva yakavhurika, vanorohwa vakavharwa.
Ndiri kutarisira kunzwa kubva kwauri.
Pindura Andres Mendoza
nekuti ini ndinowana uyu meseji pane yangu mac «kudzima dhiraivha '/ mavhoriyamu / USB' ...» hainzwisise meseji «chiitiko sysonotf»
Maicol Callero chinobata mufananidzo akadaro
uye ini ndinotora kupi macOS Sierra yekumisikidza?
Pindura Maicol Callero
Ndine dambudziko rekuedza kuiisa.
Ini ndinoita nhanho dzese, asi pandinodzima komputa, iibudise zvakare (iine USB yakagadzirira kuisirwa) uye tinya ALT panotanga ruzha rwekutangisa, iyo mac haizive iyo USB sebhutsu disk. Ini ndinongoona yakajairwa bhuti disk rekombuta. Chii chinogona kukonzereswa izvi? Pane mhinduro here?
Mhoro. Izvi zvakaitikawo kwandiri. Zvakanditorera nguva kuwana mhinduro. Kana iwe ukatarisa iyo USB (paunenge uine MacOS iwe unoona iyo Sierra icon uye dhairekita inonzi "Zvishandiso" kana iwe ukaivhura, unoona kuti izvo zvinoshandiswa zvine "ganhuriro" chikwangwani uye haugone kuvhura. Izvi zvakakosha , nekuti unozoishandisa kana uchimisikidza uye kubhaina diski.Kuti ndigadzirise izvi, ndaifanira kuenda kune imwe USB kwandaive ndatova neMacOS El Capitan, teedzera iwo mafomu kuchikamu chiri kuSierra uye ipapo chete ndipo chakandiziva (na kudzvanya ALT pakutanga) Haana kutsanangura kuti sei izvozvo zvichiitika.Ndinofunga iko kukanganisa kweDiskMaker.Kana iwe uchida maapplication, nditumire email pa eonyorch@gmail.com
Javier Alejandro Padilla akadaro
Pamusoroi. Ndiri kuyedza kuisa OS X SIERRA paMAC yangu kuburikidza neUSB .. .. Pandinoedza kuisa kubva kuUSB, bhawa iri kufamba pasi peapuro asi iri pakati rinotonhora uye denderedzwa remavara rinotendeuka uye kubva ipapo zvisingaitike chii chandingaite? Ndakaisiya yakadaro kwezuva rese uye haisi kuenda kumberi ini ndinorwara neiyi MAC yakashata 🙁
Pindura Javier Alejandro Padilla
Ndatenda zvikuru nemupiro wako.Zvese zvaunofarira kutanga kubva pakutanga usati warodha Time Machine kopi, iwe unofungei nezve kutama kubva kune imwe Mac kuenda kune imwe uchishandisa zvakanzi application?
Rega nditsanangure, isa Mac nyowani kubva ku0 uye fambisa data rako mushure memako mac mac kubva kuTime Machine.
Izvo hazvigoneke kuti ini ndiite yangu USB Bhuotable (ndakayedza iyo ne 8Gb uye 16Gb imwe)
Ndakaiyedza neDiskMaker X 6 uye ini ndinowana iko kukanganisa «Erasing drive '/ Volumes / BO16GB' ...» hainzwisise meseji «chiitiko sysonof» uye kubva ipapo hazviitike.
Ini ndakaiyedzawo neDisk Musiki. Izvo zvinondibvumidza ini kuti ndisarudze iyo yuniti iyo inotangazve uye zvakare iyo yekumisikidza, asi kana ndichinge ndangobaya pane "Gadzira Installer" bhatani, rinogara ipapo. Ini ndinogona kutobaya bhatani ka100 zvisingaite kana zvachose.
Ini ndakazviedzawo neDisk Drive. Kubaya InstallESD.dmg wobva wadzoreredza uye uchigovera iyo yekuenda USB. Inondiudza kuti inofanirwa kuongorora chitubu chemufananidzo uye painopedza inondiudza "Kutadza kuongorora InstallerESD.dmg (Basa harina kuitwa)" Kana zvachose ...
Ndine shungu, pane mumwe ane dzimwe pfungwa here?
Pindura kuna Leatus
Ini ndangozviedza neUNetbootin uye kwete…. Vane mania kana chii?
Fco Javier akadaro
Akanaka Jordi, handina kumborara kwemazuva matatu nekuda kwekuyedza kugadzirisa mac yangu mini. Icho chokwadi ndechekuti chinondiudza kuti chazvino uye kana ichiedza kutanga chakakandwa husiku hwese uye bhawa haripfuure 3 kana 2 mm uye haitange ... Chero mhinduro inogoneka? Ndiri kuruma uye nerima denderedzwa kubva pakurara zvishoma mazuva ano!
Kwaziso nekutenda pamberi
Pindura Fco. Javier
Mhoroi, ndine 13-inch macbook pro, pakati pa2012, ini ndakaisa iyo sierra uye inoshata. Ini ndoda kuisa yosemite uye mu diskmaker zvinoita »kudzima dhiraivha hakunzwisise meseji yechiitiko sysonotf» chii chandingaite?
Kana iwe uchifamba neMac yako, heino rakakwirira bhokisi rekudzivirira iro